शोएब मालिक बने पाकिस्तानको कप्तान ! | Hamro Khelkud
शोएब मालिक बने पाकिस्तानको कप्तान !
एजेन्सी – अस्ट्रेलियासँगको पाँच खेलको ओडीआई सिरीजको लागि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले प्रमुख खेलाडीलाई आराम दिँदै १६ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ ।
घोषणा गरेको टोलीमा चार खेलाडीले पहिलो पटक ओडीआई टिममा मौका पाएका छन् । नियमित कप्तान सरफराज अहमदलाई आराम दिदैं शोएब मालिकलाई कप्तानको भूमिका दिएको छ । तीब्र गतिका बलर मोहम्मद आमिरले कमब्याक गरेका छन् । पाकिस्तानले मोहम्मद अब्बास,आबिद अली,साद अली,र मोहम्मद हसनलाई पहिलो पटक ओडीआई टिममा समेटेको छ ।
प्रमुख खेलाडी सरफराज अहमद,बाबर आज़म,फकर जमान,हसन अली,शादाब खान र शाहीन शाह अफ्रिदीलाई आराम दिएको छ । मोहम्मद हफीज चोटको कारण टिम बाहिर रहेका छन् । अस्ट्रेलियासँग पाकिस्तानले क्रमश : २२, २४, २७, २९ र ३१ मार्चमा खेल खेल्ने छ ।
पाकिस्तान टोली : शोएब मलिक (कप्तान), आबिद अली, फहीम अशरफ, ह्यारिस सोहेल, इमाद वसिम, इमाम उल हक,जुनैद खान,मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसन, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), साद अली, शान मसूद, उमर अकमल, उस्मान शिनवारी र यासिर शाह ।